Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ukuhamba kwe-US: Isithintelo sohambo lwe-EU siyadanisa
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhamba yinto ebaluleke kakhulu kuqoqosho lwehlabathi kwaye kuya kuba yimfuneko ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
IKhomishini yaseYurophu icebisa izithintelo zokuhamba kubahambi baseMelika ukuya e-EU.
Amazwe amaninzi e-EU afumene ukhuthazo kutyelelo lwangaphakathi kweli hlobo.
Ukuhamba kwe-US kukhuthaza i-EU ukuba ihlale ivulekile kubantu baseMelika abagonyiweyo.
USekela Mongameli weSigqeba soLawulo lweMicimbi yoLuntu kunye noMgaqo-nkqubo uTori Emerson Barnes ukhuphe le ngxelo ilandelayo iindaba ukuba i-European Union icebisa ukuba kususwe i-United States kuluhlu lwayo lwamazwe ekufuneka kuthotyelwe imida yohambo:
“Olu luphuhliso oludanisayo kulandela ukwanda kotyelelo olungenayo ngabahambi abagonyiweyo abathe banamava kumazwe amaninzi e-EU kweli hlobo. Kubuyela umva ngaphandle kokuthathwa kugonyo — isixhobo esisebenza ngokukuko ngokuchaseneyo nezinto ezonyukayo kumacala omabini eAtlantic.
“Ukuhamba yinto ebaluleke kakhulu kuqoqosho lwehlabathi kwaye kuya kuba yimfuneko ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Ukuhamba kwe-US ikhuthaza i-EU ukuba ihlale ivulekile kubantu baseMelika abagonyelweyo, kwaye ikwabongoza ne-United States ukuba ithathe amanyathelo kwangoko okuqala ukwamkela abantu abagonyelweyo nokubuyisela uqoqosho lwethu kwezohambo. ”
Amagosa e-European Union namhlanje cetyiswa ukurhoxisa lonke uhambo olungafunekiyo olusuka e-United States njengamanani amatsha e-COVID-19 e-US atshoyo.
Namhlanje isaziso liBhunga laseYurophu lilingana nengcebiso yamazwe angama-27 angamalungu ebhloko, agcina ulawulo lwayo kwimida yawo.
UMichale K. uthi:
NgoSeptemba 9, 2021 kwi-14: 15
Ewe, i-US inyanzelise isithintelo esifanayo (ngaphambi kokuba i-UE yenze) kubahambi baseYurophu ukusukela ekuqaleni konyaka ophelileyo, kwaye isekhona.
Omabini la macala ayaphoxa.
USusan Sheats uthi:
Agasti 30, 2021 kwi-16: 42
hmmm… bendicinga ukuba sisincomo kuphela ilizwe ngalinye elinokulawula njengoko libona kufanelekile. I-Itali sele igunyazise ukuba kugonywe ngokupheleleyo, iimaski kuzo zonke iindawo zoluntu kunye novavanyo olubi lwe-covid. Ukuba amanye amazwe azamkele ezo zikhokelo, ziya kuba sengqiqweni kwaye zincede ekuqinisekiseni ukhuseleko lwalo lonke. Esi sibhengezo sinokuthi siguqulwe sibe yinto elungileyo kubahambi abanesazela kunye nomyalezo kwabo bangavumiyo ukuthathela ingqalelo ukhuseleko lwabanye ukuba bahlale emakhaya.